Sawirrada diyaarad laba qalbac u kala jabtay - BBC News Somali
Ugu yaraan lix qof oo Ameerikaan ah ayuu dhaawac soo gaaray subaxii Talaadada kaddib markii ay caasimadda Honduras ee Tegucigalpa ku burburtay diyaaraddan xilli ay soo cagadhinaysay
Diyaaradda Gulfstream G200 ayaa duulimaad gaar ah ugu kicitimaysay magaalada Austin ee gobolka Texis markii ay ka baxaysay dhabbaha ay diyaaradaha ka kacaan ee garoonka caalamiga ah ee Toncontin
Mas'uuliyiinta ayaa warar iskhilaafsan waxa ay ka sheegeen tirada dadkii diyaaradda saarnaa, qaar ayaa sheegay lix ama sagaal. "Allaa mahad leh cidna kuma dhiman," sarkaal booliska ka tirsan ayaa yiri.
Goobjooge ayaa wakaaladda Wararka ee AFP u sheegay inuu shan nin iyo haween ka caawiyay sidii ay diyaaradda uga soo bixi lahaayeen, dadkaas oo dhammaantood aanay waxba soo gaarin.
Andrew Charlton oo ah khabiir dhinaca duulimaadyada hawada ayaa BBC-da u sheegay inuu rumaysan yahay in diyaaraddan ay wax culus sidday, oo waxaa ku batay cadaadiska markii ay soo cagadhiganaysay iyadoo ku socota xawaare dhan 200 mile saacaddiiba.
Askari ka tisan milateriga oo dul saaran heegada kore ee diyaaradda kaddib markii ay burburtay
"Waxa ay aheyd in dadku ay horay fariistaan, qof dhintayna ma uu jiro taasna waxa ay caddeynaysaa inay xarigga kursiga xirnaayeen," ayuu yiri, waxa uuna intaasi ku daray waxaa la sameyn doonaa baaritaan si loo xaqiijiyo in laga hortago in shil noocan oo kale uu mustaqbalka dhaco.
2008, diyaarad ay laheyd shirkaddii hore ee diyaaradaha ee TACA ayaa ku dul burburtay meel aan halkaasi ka fogeyn. Shan qof ayaa halkaasi ku dhimitay.
Garoonka diyaaradaha ee Toncontin oo ay ku hareeraysan yihiin buuro, dhabaha ay diyaaradaha ka kacaan amaba ay soo cagadhigtaanna uu gaaban yahay ayaa lagu tiriyaa inuu yahay midka ugu halista badan caalamka.
Dowladda ayaa waxa ay meel 50km u jirta caasimadda ka dhisaysaa garoon cusub oo caalami ah.